Mareykanka oo shaaciyay talaabooyinka lagu kordhinayo DF - Axadle – Axadle
Washington (Axadle) – Xoghayaha arrimaha dibedda ee Mareykanka Antony Blinken ayaa sheegay in Mareykanku uu “aad uga xun yahay” go’aanka ay qaadatay dowladda federaalka ah ee Soomaaliya ee ay labo sano ugu kordhisay madaxweynaha iyo baarlamaanka.
Blinken wuxuu sheegay inay dhowr jeer ku celceliyeen in heshiis dhexmara dowladda federaalka iyo dowlad goboleedyada oo horseedaya doorashooyinka uu muhiim u yahay nabadda, xasilloonida iyo barwaaqada Soomaaliya.
“Waxaan sidoo kale si cad u sheegnay in Mareykanku uusan taageeri doonin waqti kordhin la’aantu iyadoo aan la taageerin daneeyayaasha siyaasada Soomaaliya iyo hanaan doorasho oo hal dhinac ah oo is barbar socda,” ayuu yiri Blinken
Tallaabooyinka noocan oo kale ah waxay noqon doonaan kuwo aad u kala qaybinaya, wiiqaya nidaamka federaalka iyo horumarka siyaasadeed ee udub-dhexaadka u ah horumarka dalka iyo saaxiibtinimada caalamiga ah, iyadoo laga weecin doono feejignaanta Al-shabaab. Waxay sidoo kale dib u dhigayaan hirgalinta doorashadii loo balan qaaday ee shacabka Soomaaliyeed ay sugayeen. ”
Wasiirka Arimaha Dibada ayaa sheegay in dhaqan galinta sharcigaas [muddo kororsiga] waxay caqabad weyn ku noqon doontaa wadahadallada oo dhabar jab weyn ku noqon doonta nabadda iyo amniga Soomaaliya.
“Waxay ku qasbi doontaa Mareykanka inuu dib u qiimeeyo xiriirka aan la leenahay Dowladda Federaalka Soomaaliya, oo ay ku jiraan kaalmadiisa diblomaasiyadeed iyo mid bani’aadamnimo, iyo inuu tixgeliyo dhammaan tallaabooyinka suurtagalka ah, oo ay ku jiraan cunaqabateynta iyo xaddidaadda fiisaha. Iyadoo laga jawaabayo dadaallada lagu wiiqayo amniga iyo xasilloonida, Mareykanka ayaa yiri. Wasiirka Arimaha Dibada.
Blinken wuxuu sheegay inuu ugu yeeray madaxda federaalka iyo maamul goboleedyada inay sida ugu dhaqsiyaha badan ugu laabtaan wadahadalada isla markaana ay isla meel dhigaan qaabkii lagu xalin lahaa qalalaasaha doorashada.
Wuxuu sidoo kale ugu yeeray dhammaan dhinacyada inay is xakameeyaan, sii wadaan wadahadalka kana fogaadaan ficillada keli ah ee kordhin kara xiisadaha isla markaana wiiqi kara geeddi-socodka dimuqraadiyadda Soomaaliya iyo hay’adaha.